आवेदन प्रक्रिया - USAcollegeX.com ​
अंकहरू भन्दा धेरै बोल्नुहोस।
हाम्रो ग्राहकहरु को 97% ले भन्यो कि उनि कलेज प्रवेश सहायता चाहिन्छ यदि उनि हामिलाई आफ्नो मित्रहरुलाई अनुशंसा गर्नेछन्।
आवेदन गर्नु अघि
तपाइँले कलेजमा आवेदन गर्नु अघि त्यहाँ धेरै चीजहरू विचार गर्दछन्। हामी अत्यधिक अनुशंसा गर्दछौं कि तपाइँ अमेरिकी कलेजहरूमा आवेदन गर्नु अघि निम्न सहयोगी जानकारी पढ्नुहोस्।
यूएस कलेजहरू लागु हुने आवेदन शुल्कको कारण महंगी हुन सक्छ। सौभाग्य देखि, आवेदकले यी शुल्कहरू waived प्राप्त गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। स्वीकार गर्ने मौकाहरू बढाउनको लागि, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि कलेज प्रवेश अधिकारीहरुले आवेदन कसरी प्राथमिकता दिन्छन्।
तपाईंको आवेदन पेश गरे पछि तपाईंले कस्तो अपेक्षा गर्नुपर्छ? जब तपाईं आफ्नो नतिजा पर्खनुहुन्छ, यहाँ हामी के सल्लाह दिन्छौं। विद्यालयको प्रवेश अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्, र उनीहरूका नामहरू जान्नुहोस्। उनीहरूले तपाईंको आवेदनको स्थिति अधिसूचना राख्न सक्दछन्। यदि तपाईं यसको लागि अझै समय छ भने तपाइँका TOEFL (वा SAT / ACT वा GMAT) लाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वीकार गरेपछि (वा अस्वीकृत)
तपाईं केहि विद्यालयहरू द्वारा स्वीकृत गर्दै हुनुहुन्छ, अझै अरूद्वारा अस्वीकृत। तपाईका विकल्पहरू के हो? सबै स्वीकृति र अस्वीकार पत्रहरू सावधानी पढ्नुहोस्! यी अक्षरहरूले यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्न महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश गर्न सक्छ।
उपस्थित हुनु अघि
तपाईं केहि स्कूलहरु को प्रवेश प्रस्ताव को बारे मा धेरै रोमांचित हुनुहुन्छ। तर तपाईंले प्रभावकारी ढंगलाई विद्यालयहरू कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र तपाईंको लागि उत्तम छनौट बनाउनुहुन्छ? विद्यालयको स्थान, लागत, अकादमिक गुणस्तर, रेटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, सेवाहरू, क्याम्पस सुरक्षा, र जीवनको गुणस्तरलाई सबैलाई विचार गर्नुपर्छ।
कृपया तल लिङ्कलाई हेर्नुहोस् र थप जानकारी पढ्नुहोस् "नामांकन भन्दा पहिले 2-3 महिना, ""युएनको लागि तपाईंको प्रस्थान अघि3सम्म7दिन, "र"तपाईंको स्कूलमा आगमन पछि।"
यूएस कलेज प्रवेश प्रक्रिया
छात्रवृत्ति / अनुदान / ट्यूशन मुक्त (24)
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि (88)